2n3904: into ekufuneka uyazi malunga nale transistor | Izixhobo zasimahla
Phakathi Izinto ze-elektroniki zihlalutyiwe kule bhulogi sele kukho iintlobo ezininzi ze-transistors, zombini i-bipolar kunye ne-field effect. Ngoku lixesha lokongeza enye kuluhlu, njengoko kunjalo 2n3904, yenye yezona zisetyenziswayo kuninzi lweeprojekthi ze-elektroniki. Kule meko yenye ye-BJT, okanye i-bipolar, kodwa inezinto ezithile ezinomdla ekufuneka uyazi.
Apha uya kuyazi ukuba yintoni kanye kanye, i-pinout yayo, apho unokufumana khona iidatha zedatha, njani ukuthenga enye yazo, kwaye inde njl.
1 Yintoni i-transistor 2n3904?
1.1 Iimpawu kunye nedatha
2 Uyithenga phi i-2N3904
Yintoni i-transistor 2n3904?
El 2N3904 transistor Luhlobo lwe-bipolar transistor, uhlobo lwe-BJT lwesiginali encinci (amandla asezantsi kunye namandla asezantsi, anombane ophakathi). Olu hlobo lwe-transistor yi-NPN, kwaye inezinto ezinomdla ezinje ngokutshintsha ngokukhawuleza (inokusebenza ngokuhamba rhoqo), amandla ombane aphantsi, kwaye ilungele unxibelelwano kunye nokwandiswa.
Uyabona ngaphakathi izixhobo zemihla ngemihla ezinje ngeethelevishini, iiradiyo, ividiyo okanye abadlali beaudio, iiwotshi zekartz, izibane ezibengezelayo, iifowuni, njl.
Esi sixhobo se-transistor siqhelekile. Ibiyi amalungelo awodwa omenzi wechiza yi-Motorola I-Semiconductor kwii-60s, kunye nePNP 2N3906 (iqabane layo). Enkosi kuye, ukusebenza kwandiswa. Kwaye ayibizi, iphakheji ye-TO-92 namhlanje, njengokutshintsha iphakheji yakho yentsimbi endala.
Ukongeza kwi-Motorola, yenziwe ngezinye iinkampani ezinje ngeFairchild, ON Semiconductor, Semtech, Transys Electronics, KEC, Vishay, Rohm Semiconductor, Texas Instruments (TI), Central Semiconductor Corp, njl.
Ewe i-pinout yakho, ungayibona kumfanekiso ongaphambili, ukuba njengesiqhelo kwii-transistors, unezikhonkwane ezithathu ezinamanani ezishiya indawo erhangqiweyo yephakheji ngasemva, oko kukuthi, ukutolika umzobo kunye nokutshatisa le uyiphethe ngesandla ngoku , Kuya kufuneka ubeke indawo ethe tyaba phambi kwakho.
Iimpawu kunye nedatha
Ukuba uyazibuza malunga iinkcukacha eneenkcukacha Olu hlobo lokuhamba, nazi ezinye zazo:
Isixhobo: I-semiconductor transistor
Uhlobo: i-bipolar okanye i-BJT
Ukutshintsha rhoqo: 300Mhz
Ukuchithwa kwamandla: 625mW
Umqokeleli wangoku wangoku ngokuthe ngqo: 200mA
Ukuzuza ngoku kwangoku (hFE): 100
Uluhlu lobushushu oluhlanganyelweyo: -55ºC ukuya ku-150ºC
Umqokeleli we-emitter - amandla ombane wokugcwala angaphantsi kwama-300 mV e-Ic = 10mA
Enye indlela: NTE123AP
Olunye ulwazi malunga neetransistors - hwlibre.com
Khuphela uxwebhu lwedatha
Uyithenga phi i-2N3904
ukuba thenga i-transistor Kwezi mpawu, ungasebenzisa iinkonzo ezahlukeneyo zeevenkile ezikhethekileyo kwi-elektroniki, okanye kumaqonga anjengeAmazon. Umzekelo, Nazi ezinye iingcebiso:
Isikhwama seBojack esineziqwenga ezingama-250. Abaguquleli beentlobo ezininzi, phakathi kwazo kukho i-2n3904.
Akukho mveliso ifunyenweyo Ikwanayo le pakethi yeeyunithi ezingama-50 ze-2n3904.
Kakhulu Ikwabonelela ngenye ipakethi engabizi kakhulu kwaye ineeyunithi ezingama-25 ze-2n3904.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Izinto zombane » 2n3904: into ekufuneka uyazi malunga nale transistor